သီတင်းကျွတ် Website အထူးလျှော့ဈေး (၂၀% အထိ) - Myanmar Web Designer (MWD) Co., Ltd.
Home » သီတင်းကျွတ် website အထူးလျှော့ဈေး (၂၀% အထိ)
ဒါကြောင့် Website လုပ်ဖို့ စိတ်ကူးမိပြီဆိုရင်တော့ သီတင်းကျွတ် အခါသမယကောင်းလည်းဖြစ်၊ Promotion လည်း ၂၀ ရာခိုင်နှုန်းအထိ ရနိုင်လို့ အခုအချိန်က website လုပ်ဖို့ အကောင်းဆုံးအချိန်ပါပဲ ?
Myanmar Web Designer (MWD) Co., Ltd. မှ website ဝန်ဆောင်မှု အတွက် အာမခံချက် / အားသာချက်များ
▪ ပေးရသောကုန်ကျစရိတ်ထက် ပိုမိုထိုက်တန်သော ဝန်ဆောင်မှုကို အာမခံခြင်း
▪ လူကြီးမင်း၏ Website ကိုရေးသော developer နဲ့ တိုက်ရိုက်တွေ့ဆုံ ဆွေးနွေးနိုင်ခြင်း၊ ထို့ကြောင့် professional အကြံပေးချက်များ ရယူနိုင်ခြင်း၊ Project အကြောင်း ထိထိရောက်ရောက် ဆွေးနွေးနိုင်ခြင်း
▪ အင်တာနက်တွင် လူကြီးမင်း၏ website ကို ရှာဖွေရလွယ်ကူစေခြင်း
▪ ကွန်ပျူတာ၊ မိုဘိုင်း၊ Tablet အမျိုးမျိုးနှင့် အဆင်ပြေစွာ ကြည့်ရှုနိုင်ခြင်း
▪ ဝက်ဆိုက် လျှင်မြန်ပေါ့ပါးခြင်း
▪ အရည်အသွေးစစ် (QC) ထားရှိသောကြောင့် website အကြောင်းမသိလျှင်တောင်မှ website ကောင်းတစ်ခုရရှိဖို့ စိတ်ချထားနိုင်ခြင်း။
▪ စိတ်တိုင်းကျသည်အထိ ရေးဆွဲပေးခြင်း
▪ အချိန်တိုအတွင်း ပြီးစီးခြင်း
▪ Browser အမျိုးမျိုးနဲ့ အဆင်ပြေစွာ ကြည့်ရှုနိုင်ခြင်း
▪ ကျွမ်းကျင်သူများမှ ဝန်ဆောင်ပေးခြင်း
▪ Response rate မြန်သော After-Sales Support တစ်နှစ်ပါတ်လုံးရှိခြင်း၊
▪ On-Call Service ရှိခြင်း၊ (email setup, website training များအတွက် ခေါ်ဆိုနိုင်ခြင်း)
ဒါတွေအပြင် MWD မှာ –
? Web Application အမျိုးမျိုးရေးဆွဲခြင်း
ဥပမာ။ ။ https://www.dearoffice.com
“ Dear Office” ဆိုတာ ဝန်ထမ်းရာထူး အဆင့်တိုင်းအတွက် ရုံးအလုပ်တွေကို လွယ်ကူ၊ လျှင်မြန်စွာနဲ့ စနစ်ကျစွာ လုပ်နိုင်စေလို့ အလုပ်တွေ မြန်မြန်ပြီးမယ့်အပြင်၊ ဝန်ထမ်းတွေ အလုပ်ကိုပိုချစ်လာပြီး၊ လုပ်ငန်းဝင်ငွေတိုးစေမယ့် မရှိမဖြစ် Office Management Web Application ပါ။
? Facebook နှင့် Google ကြော်ငြာ ဝန်ဆောင်မှု
? Hosting / Server
? Logo & Graphic Design အမျိုးမျိုး
စတဲ့ ဝန်ဆောင်မှုတွေကို တစ်နေရာတည်းမှာပဲ ဝန်ဆောင်မှုပေးနေခြင်းကြောင့် ရေရှည်လက်တွဲဖို့ အဆင်ပြေစေပါတယ်။
“ မြန်မာနိုင်ငံရှိ လုပ်ငန်းများအားလုံး အင်တာနက်ပေါ်တွင် အောင်မြင်စွာ လုပ်ငန်းချဲ့ထွင်နိုင်ရန်” ဟူသော MWD ကုမ္ပဏီ၏ ဦးတည်ချက်အရ Customer များ၏ လုပ်ငန်းများ အောင်မြင်မှုရှိစေရန် အထူးအလေးထား ဆောင်ရွက်ပါသည်။
ပရိုမိုးရှင်းကာလကတော့ အောက်တိုဘာ (၁) ရက်နေ့ကနေ (၃၁) ရက်နေ့အထိ သာဖြစ်လို့ အမြန်ဆုံး ဆက်သွယ်လိုက်ပါ။
☎ — 01-2314-964, 09-431-33843, 09-431-44962, 0997-60-310-75
? — [email protected]
? — https://www.myanmarwebdesigner.com
? — https://www.dearoffice.com
? — #165, 2nd & 3rd floor, Corner of Ahlone Rd & Htar Nar St, Ahlone Tsp, Yangon.